Indlela yokubala i-Tip kwiNtloko yakho
Bala i-Tip ngaphandle kwePen naPhepha okanye i-Calculator
Kuyinto yesiko ukushiya isipho kwiinkonzo ezininzi ezibonelelwa ngabantu abafana nabalindi kunye nabaqhubi, abaqhubi bamatekisi, abafazi beehotele, abahamba phambili beenkampani kunye nabasebenzi bee-salon ukuba bathethele ezimbalwa. Umthetho wexabiso lesithupha ungama-15%, nangona kukho iingcamango ezahlukileyo malunga nomlinganiselo oya kulungelelaniswa nenkonzo ekhethekileyo (ngokuqhelekileyo i-20%) kunye nenkonzo embi (10% okanye ngaphantsi). Abanye abantu baqhwaba ngokunganiki nto, njengamaxesha amaninzi umncedisi akayiyo isizathu somcimbi wenkonzo; Imiba yeemoto kunye nekhitshi zingabangela iingxaki kwaye aba bantu bathembela kwiingcebiso zokongeza umvuzo wabo osisiseko .
Ngoko ngoku ukuba sinengcamango malunga nokuziphatha okubandakanyekayo, vumela ukujonga ezinye iingcamango ezilula zemathematika ukwenzela ukuba ukubala kube lula kodwa kusebenze.
Indlela elula yokubala i-Tip% 15%
Umthetho wesigxina - isevisi ejwayelekile-15%. Iindlela ezimfutshane eziqhelekileyo ezisetyenziswayo ukuya kwi-15% kukufumana i-10% kwaye wongeza isiqingatha. Oku kubalwa okulula, kuba konke okufuneka uyenze ukuze ufumane i-10% isusa idilesi yesimiselo esinye isikhala ngakwesobunxele (yenza inombolo encinci).
Cinga i-bill ye 47.31. Ukubonakala kokuqala kubonisa ukuba i-10% yi-4.70 nesiqingatha sesi sixa esingu-2.35, ngoko i-tip ye-7.00 ingqiqweni. Oku kulula nje ngokuba sinokwenza imathematika ngqo - 4.70 yongeza 2.35 yi-7.05 - kodwa sifuna indlela elula, kungekhona isayensi echanekileyo. Esinye isicwangciso esilungileyo kukusebenza ukusuka kwixabiso eliphezulu kakhulu, ngamanye amagama, ukuba ibhajethi ingama-50s ngoko i-tip ifanele ibe kwindawo ye-7.50. Ukuba i-bill ye-124.00, i-logic ilandela ukuba i-12 idibanise 6 = 18 ukwenzela ukuba isamba esingu-124 sine-18 okanye-142 sinengqiqo.
Ukubala i-Tip ngokusekelwe kwiRhafu yokuThengisa
Esinye isicwangciso esilungileyo kukusebenza kwerhafu yokuthengisa. Khangela iirhafu zakho zerhafu kwaye uthembe isicwangciso esisekelwe kwisixa. Kwisixeko saseNew York, irhafu kwisidlo ngu-8.75% ukuze ukwazi ukuphindwa kabini kwerhafu kwaye umboneleli wakho wenkonzo uyavuya.
Kukho nezinye iimpendulo ezonwabileyo nezizodwa kumbuzo wendlela yokwenza izibalo ngaphandle kokuzicima.
Cinga ngemimiselo elandelayo abantu ababonelele yona:
Inkonzo enkulu - ii-bill 10 times, kwaye kabini.
Ngaphantsi kwenkonzo enkulu - amaxesha amabhilidi 10%.
I-bill bill phantsi kwe-$ 50:
Inkonzo enkulu - ii-bill times 10% ize iphindwe kabini - uza kuba ngaphezu kwe-15 kwaye uxabiso lufanele luphawulwe.
Inkonzo enhle - kwindawo ethile phakathi kweyona mkhulu kwaye ingaphantsi kokulungileyo. Yongeza encinane ukuya ngaphantsi kokulungileyo kwaye uya kukhuseleka.
Ngaphantsi kweenkonzo ezilungileyo - amaxesha atyunjiweyo 10% - umyalezo uya kuhanjiswa kodwa uhlakaniphile ngokwaneleyo ukuba uqaphele ukuba akunakuba yiphutha labo kuphela.
Ukuhlawulwa kwebhilikithi ngaphezulu kweedola ezingama-50:
Qinisekisa ukuba uqale izibalo zakho ngokusekelwe kwintlawulo yokuqala yentlawulo yebhili yakho.
Inkonzo enkulu - i-10% yebhili-mali - iphindwe kabini.
Ngaphantsi kwama-10% ajikelezayo.
Ngaphandle kwalezo zindleko apho isicatshulwa sele sifakiwe, ukuphawula kunye nendlela yokufumanisa isicatshulwa ngamava ahlukeneyo. Uqikelelo kunye nokujikeleza yinto endiyenza ngayo yonke ixesha lokugxotha njengoko andiyi kuxhalaba malunga neepesenti ezimbalwa apha nangapha. Yaye 'i-tip-ically' ndijikeleza njengoko kuyinto engavumelekanga xa ndivakalelwa kukuba ndiba nesisa xa ndiphuma esidlweni.
Ehlelwe ngu-Anne Marie Helmenstine, Ph.D.
Indlela yokusebenzisa i-RAND ne-RANDBETWEEN Imisebenzi kwi-Excel
Inkcazo yeBimodal kwiStatisti
Funda ukuhluka phakathi kweParameter kunye neSatisati
Indlela yokunqoba iMat
Inani leeZero kwiMillion, iBillion, Trillion, kunye neNinzi
I-Curve yeBell kunye neNgcaciso yokuSasazwa kwengcaciso
Umsebenzi wePolynomial Function
Iyiphi inkqubo ye-Base-10 yeNkqubo?
Inani kunye neMisebenzi kwi-Base Ten
Funda indlela yokudibanisa "Ukubuyiselwa" (ukujonga kwakhona) ngesiFrentshi
UJomo Kenyatta: UMongameli wokuqala weKenya
Xenophobia eUnited States
'Robinson Crusoe' Imibuzo yoFundo kunye neNgxoxo
Yintoni Umehluko Phakathi kweSrose neSpralose?
Ukwahlukana phakathi kweNgeniso kwaye emva koko
Ingxelo yezopolitiko kaHitler
IYunivesithi yaseMntla yaseAlona
I-Cubism kwi-History History
Ngaphambi kokuba uthenge i-NASCAR Scanner
Oothixo noodadekazi bamaMaya
Yintoni Oyenzayo Xa Uthando Lubuhlungu: Iingcaphuno zoMnxeba
Iingoma eziPhambili zokuqala zokufunda ngeGitaritar kagesi
Ingxoxo kwiSikolo samaFrentshi: Iindaba ezilula zeFrench neNgesiNgesi ezimbini
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi "Hlala" (ukuhlala)
Iprofayile yeentlobo: I-Perch ephuzi
I-Alchemical Sulfur, i-Mercury neTyuwa kwi-Occultism yaseNtshona
Oothixo kunye neentombikazi zeMfazwe kunye neMfazwe
Indlela Yokuphucula UMTHETHO WAKHO Amanqaku
Ubomi bobuNyuka kunye neNkcubeko
Ngaba Unako Ukusela Sanitizer Hand?